Mogadishu Journal » 2021 » April » 5
Al-Shabaab oo soo bandhigtay Sawirada weerarkii ay ku qaadeen Bariire (Sawirro)
Qeybta warbaahinta u qaabilsan kooxda Al-shabaab ayaa baraha ay ku leeyihiin internetka ku shaaciyey sawirro laga qaaday weerarkii maalmo ka hor dagaalyahanada kooxdaas ku qaadeen saldhiga ciidanka milateriga Somalia li leeyihiin degaanka Bariire ee gobolka Sh/hoose. Al-shabaab...
Wasiirka Cadaalada dowlada Zambia oo booqasho ku jooga Somaliland (Sawirro)
Hargeisa:-Wafdi ka socda dalka Zambia ayaa maanta booqasho ku tegay magaalada Hargeysa ee Somaliland, kuwaasoo kulamo la qaatay madaxda Somaliland. Wafdigan waxaa hoggaaminayay wasiirka cadaaladda dalka Zambia Gavin Lubinda iyo mas’uuliyiin kale, waxaana Hargeysa ku soo...
Baarlamanka dalka Kosovo ayaa muddo shan sano ah xilka Madaxweynaha dalkaas u doortay haweeney Xildhibaanada Baarlamanka oo ka kooban 120 Xubnood ayaa isugu yimid kalfadhi aan caadi aheyn muddo labo maalmood ah waxayna 71 cod siiyeen haweeneyda Vjosa Osmani, oo 38 jir ah horeyna...
Pep Guardiola ayaa uga digay ciyaartoydiisa Manchester City inaysan si fudud u qaadan Borussia Dortmund iyo “tayadooda cajiibka ah” talaadada lugta hore ee wareega 8da Champions League. City ayaa ka reebtay kooxda ay xafiiltamaan ee Dortmund ee ka ciyaarta Bundesliga Borussia...
Open letter is harshly condemned by the president’s office, which says the move is ‘reminiscent of coup times’. 5 Apr 2021 Turkish authorities on Monday detained 10 former admirals after a group of more than 100 retired senior navy officers issued a statement that government...
Dowlada federaalka Soomaaliya ayaa taageero mug leh u muujisay Boqortooyada Urudun oo laga soo warinayo khalalaase siyaasadeed, kadib markii Boqortooyada xir xirtay xubno uu ku jiro Boqorka Walaalkiis oo looga shakiyay shirqoolo. Ciidamada ka amar qaata Boqor Cabdalla Bin Xuseen...
Dowladaha Mareykanka iyo UK oo u hanjabay Madaxda DF iyo kuwa maamul goboleedyada
Madaxda dowlada federaalka Soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedyada dalka ayaan wali ku heshiin doorashada waqtigeeda la dhaafay ee dalka ka dhaceysa, waxaana wali khilaaf xoogan ka taagan yahay qabashada doorashada iyo sida loo wajahayo. Golaha amaanka ee Qaramada Midoobay oo...
Madaxweynaha Galmudug oo ku qasbanaaday in uu maanta aado Dhuusomareeb
Madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye (Qoor Qoor) ayaa maanta lagu wadaa in uu gaaro magaalada Dhuusomareeb ee caasimada Galmudug uu ka maqnaa in ka badan 40-cisho. Dastuurka u degsan maamulka Galmudug ayaa dhigaya in Madaxweynaha deegaanada Galmudug...
(Daawo Sawirro) Askartii lagu dhaawacay Aw-dheegle & Bariire oo Muqdisho la keenay
Muqdisho:-Wasiirka Wasaaradda Gaashaandhigga Somalia Xasan Xuseen Xaaji ayaa ku booqday Isbitaalka xoogga ee magaalada Muqdisho dhaawacyada askar ka tirsan ciidanka Gorgor oo ku soo dhaawacmay weeraradii shalay Al-shabaab ku qaadeen Bariire iyo Aw-dheegle. Xasan Xuseen Xaaji ayaa...
(Daawo Sawirro) Ciidamada PSF oo howlgal ku dilay xubnihii ugu badnaa Daacish
Howgal qaatay 48-saac oo ay ciidamada PSF ku qaadeen degaannada Baraagaha Madax Madow iyo Dhabancaddo Ee Buuraha Cal Miskaat oo hoostaga degmada Balidhidin ee gobolka Bari ayaa lagu beegsaday goobo ay Daacish ku sugnaayeen . Howlgalkan ayaa ciidamada PSF waxay...